Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Manchester City Oo Diyaarisay Dalabka Cusub Ee Harry Kane, Xaalka Marco Asensio, Haaland Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Manchester City oo diyaarisay Dalabka Cusub ee Harry Kane, Xaalka Marco Asensio, Haaland iyo Qodobo kale
August 19, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalada Kale, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Manchester City ayaa diyaar u ah dalab dhan £ 150m si ay ula soo saxiixato weeraryahanka reer England Harry Kane, oo 28 jir ah, iyadoo ilo wareedyo hadda ay sheegayaan in taasi ay ku filnaan karto in Tottenham iyo guddoomiye Daniel Levy ay wadahadalo la furaan. (independent)
Haddii Manchester City ay ku guuldarreysato inay Kane xagaagan sugto, kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa la sheegay inay u aragto bedelka xiddiga heerka caalami ee dalka Serbia Dusan Vlahovic, oo 21 jir ah. City ayaa lagu soo waramayaa inay ku biirtay loolanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka Fiorentina 80m euros. (Firenze Viola)
Liverpool ayaa dib u dhac ku keentay baacsigii ay ugu jirtay xiddiga khadka dhexe ee reer Portugal ee Lille Renato Sanches, iyadoo 24 jirkaan uu dhaawac ku seegi doono lix isbuuc. (Mirror)
Kooxda heysata horyaalka Premier League ee Manchester City ayaa wadahadalo kula jirta 24 jirka reer Portugal Ruben Dias oo ku saabsan heshiis cusub. (thesun)
Arsenal ayaa laga yaabaa inay 34 milyan ginni kula soo wareegto 25 jirka Real Madrid kubad sameeyaha reer Spain Marco Asensio. (Fichajes)
Tottenham ayaa sare u qaaday xiisaha ay u qabto daafaca reer Serbia iyo Fiorentina Nikola Milenkovic kadib markii West Ham ay go’aansatay inaysan daba galin 23 jirkaan. (The Times – rukunka ayaa loo baahan yahay)
Watford ayaa ku dhow inay dhameystirto heshiiska 26 jirka qadka dhexe ee Turkiga Ozan Tufan oo ka tirsan Fenerbahce. (theathletic)
Kooxaha Arsenal iyo Manchester United ayaa loo sheegay inay iska ilaawaan saxiixa daafaca dambeedka midig ee kooxda Atletico Madrid Kieran Trippier oo 30 jir ah (AS).
Weeraryahanka reer Masar Mohamed Salah, oo 29 jir ah, ayaa laga yaabaa inuu qarka u saaran yahay inuu qandaraas cusub u saxiixo Liverpool . (thetimes)
Everton ayaa kula soo saxiixan karta weeraryahanka Schalke Matthew Hoppe wax ka yar 7 milyan oo ginni oo lagu qiimeeyay xiddiga reer Mareykan sababtoo ah xaaladda dhaqaale ee kooxda Jarmalka. Toffees-ka ayaa ka mid ah kooxo dhowr ah oo xiiseynaya 20-jirka waxaana dalab £ 4m ah weli loo arki doonaa ganacsi wanaagsan. (Bild)
Liverpool ayaa ah “kuwa ugu horreeya” tartanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka Borussia Dortmund iyo xulka Norway Erling Braut Haaland, oo 21 jir ah (Mirror)
Crystal Palace ayaa dalab 5 milyan ginni ah ka gudbisay xiddiga qadka dhexe ee reer England Will Hughes, oo 26 jir ah, waxaana diiday Watford . (thesun)
Weeraryahanka reer Wales Gareth Bale, oo 32 jir ah, ayaa dib ugu soo laabtay Real Madrid ka dib markii uu dib ula midoobay Carlo Ancelotti, oo ay hore isku khilaafeen Zinedine Zidane. (Marca)
Juventus ayaa Liverpool iyo Tottenham ku garaacday saxiixa xiddiga reer Brazil ee Kaio Jorge oo 19 jir ah kana yimid kooxda Santos. (Goal)
Manchester United ayaa wali eegaysa suurtogalnimada ay kula soo saxiixan karto xiddig kale oo khadka dhexe ah. Heshiis kasta wuxuu u baahan yahay in lagu maalgeliyo bixitaanka ciyaartoyga kadib imaatinka daafaca dhexe ee reer France Raphael Varane, oo 28 jir ah, iyo garabka England Jadon Sancho, oo 21 jir ah (Manchester Evening News)
Xiddigii hore ee Newcastle iyo Chelsea Demba Ba oo 36 jir ah ayaa ka tagay kooxda Lugano ee dalka Switzerland , iyadoo reer Senegal uu u ciyaaray kooxda 48 daqiiqo oo kaliya. (Talksport)
Barcelona ayaa rajeyneysa inay kordhiso 200m oo euro oo dheeri ah si loo yareeyo deynta lagu leeyahay iyadoo la iibinayo 27 jirka daafaca Faransiiska Samuel Umtiti, xiddiga qadka dhexe ee reer Brazil Philippe Coutinho oo 29 jir ah iyo kubadsameeyaha reer Bosnia Miralem Pjanic oo 31 jir ah (Goal)
25 jirka Manchester United ee qadka dhexe reer Brazil Andreas Pereira ayaa la sawiray inuu amaah ugu biiro Flamengo . (Fabrizio Romano)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer England Joe Willock, oo 21 jir ah, ayaa rajeynaya inuu jabiyo rikoorkii gooldhalinta ee isku xigta ee Alan Shearer isla markaana uu taariikh ka dhigi doono kulankiisii ​​labaad ee ugu horreeyey Newcastle oo ay wajahayaan Aston Villa toddobaadkan. (Mirror)